Dhacdo Taariikhiya iyo Isbadalada Dunida - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Dhacdo Taariikhiya iyo Isbadalada Dunida
Dhacdo Taariikhiya iyo Isbadalada Dunida
Caawa ayaad fursad taariikhi ah oo aad indhahaaga ku arki doonto dhacdo xidigiska muhiim ah, Waxaa markii ugu horreysay muddo 8 boqol oo sano ah si aad ah isugu soo dhowaan doona meereyaasha Cirjiidh ama Cirjeex (Saturn) iyo Raage oo sida oo kale Saxal (Jupiter) loo yaqaanno.
Cirjiidh iyo Raage oo ah meereyaasha ee ugu weyn bahda qorraxdu midayso (Baho Cadceed), ayaa samada adduunyada ka muuqan doono iyaga oo isu jira masaafadii ugu dhoweyd ee ay isu jirsadaan tan iyo sannadkii 1226 kii taariikhda dhalashadii Ciise (CS) kaddib.
Diisambar isla marka ay qorraxdu dhacdo ayaa si aan madmadow ku jirin samada looga kari doonaa labada meere oo u eeg laba xiddigood oo aad u widhwidhaya, si muuqatana isugu dhow. Muddo hal saac ah oo qorrax dhaca ka dambeeya ayaanay sidaas uga sii muuqan doonaan jihada qorraxdi ka dhacdo.
Meereyaashani fogaanshiyahooda awgeed ayaa ay cirka uga muuqdaan sida xiddigaha iyaga oo u ifaya, maadaama oo ay sida dayaxa ay dhulka ku soo celiyaan ilayska qorraxda. Meeraha Cirjiidh ayaana ka dhalaal iyo ilays badan meeraha Raage. Cirjiidh isagu waa caddaan aad u widhwidhaya, halka Raage uu midabkiisu casuus huruud u eeg leeyahay.
Caawa iyo Sidaad u arki karayso
Caawa oo ay bishu tahay 21 December ayaa aad arki doontaa labadan meere, oo meeraha Raage uu sarreeyo, Cirjiidhkuna hooseeyo, hal saac qorraxda kaddib ayaa uu muuqaalkoodu sii joogi doonaa. Sidaas ayaanu xaalku ahaan doonaa maalin kasta oo bishaas Diisambar ah, iyada oo maalinba maalinta ka dambaysa ay labada meere intii maalintii hore isaga sii dhowaan doonaan.
Bisha Diisambar 21-keeda ayaa ay isu jirsan doonaan masaafad ugu dhow, oo ay mararka qaarkood u muuqan doonaaba sida in ay isku dhageen. Meeraha Raage waxa uu leeyahay qaab wareeg ah waxaana dusha sare kaga meersan ilays khafiif ah, halka meeraha kale ee Cirjiidh aad arkayso in uu yahay kubbad yar laakiin ka weyn Raage, oo ay ku hareeraysan yihiin afar dhibcood oo sida xiddigaha u dhalaalayaa.
Afartaas xiddigood ee ku wareegsan meeraha Cirjiidh waa waxa loo yaqaanno Afarta dayax ee ‘Galilean’ waana afarta ugu weyn dayaxyo badan oo uu meerahani leeyahay.
Arintani xidhiidh ma la leedahay isbadalada dunida ka socda .?
Qoraalo danbe ayaynu insha Allaah ku faalayn doonaa.
WQ: Abdi Aziz Ahmed Ismail
Previous articleSacuudiga oo joojiyay in loo safro Xaramka